WAARI MAYSIDE WAR HA KAA HADHO | ToggaHerer
← TIIRKII NABADDA AYAA GODGALAY
Inaalilaahi wa,inaa ilayhi raajicuun rabibaan naxariistiisa jano uga baryaynaa xaaji cabdikariim xuseen →
INAALILAAH WA INA ILEYHI RAAJICUUN
XAJI CABDIKARIIM XUSEEN ( CABDI WARAABE ) AHN ( 1904/5 ilaa 2019 )
ALLE HA U NAXARIISTO XAJI CABI WARAABE OO GEERIYOODAY MAANTA ” 10 – 5 – 2019 ” JIMCE ( Ramadan 5 1440 Hijriah )
” ☘SUMADII NABADDA ” ama “ ASTANTA NABADA ☘”
Xaaji Cabdikariim xuseen Alle ha u naxariisto e oo loo yaqaano Xaaji Cabdi waraabe waxa uu ku dhashay masalaha Hargeisa laagta Uubaale.
Xaaji Cabdikariim waxa uu dhashay sida uu sheegay gugii caanka ahaa ee Caano wayne ee jiilaalkiisuna noqdey xaaraamo cune.
Qiyaastii taariikhdaasi oo aan filayo in ay tahay sanadihii u dambeeyey qarnigii 19naad ama horaantii qarnigii 20naad ba.
Waxa Aabihii la dilay isaga oo yar oo jira 37 habeen, markii uu koray ee la yidhi Aabahaa u soo aar oo ninkii diley loo tilmaamay ayuu ninkii halkuu deganaa tagey una marti noqdey.
Ninkaasina si wanaagsan ayuu u martigaliyey sida aan xaajiga dhawr goor ka dhagaystay isaga oo ka waramaya, dabadeed markii waagii baryey ayuu isku sheegay una sheegay ujeedadii uu u socday.
Iyo in aanu u aareyn Aabihii ee uu saamaxay, sida taariikhda lagu xuso, xaaji Cabdi oo nin dhalinyaro ah ahaa ayaa waydiistay in uu inan siiyo oo uu isagu Aabo u noqdo, ninkaasi xaajiga Aabihii ayey wax isku ahaayeen oo awowbuu ugu toosnaa Xaaji Cabdi.
Ninkii waxa uu Xaajiga siiyey inan yar oo uu dhalay oo markaa yarayd, sidaasi ayuu xaaji Cabdi ugu noqdey beeshiisii ku soo talisay in uu aabihii u aaro, dabadeed markii u waramayna la isla qaatey in uu isagu ka talo wanaagsanaa.
Xaaji Cabdi Alle ha u naxariisto e waxa uu noqdey nin nabadeed maadaama oo taariikhda somalida cid nabad qaadataa oo Aarka diidaa ay ku yarayd ama aanay jirinba.
Xaajigu waxa uu ahaa Geeljire oo uu ku gaadhay ilaa 25sano jir.
Xaaji Cabdikariim xuseen hooyadii waxa la odhan jirey Qaayibo faarax shabeel waxaana ay ahayd sacad muuse, Nuux ismaciil oo reer Axmed ah oo waliba Ba caylo ka sii ah sida uu xaajigu sheegay.
Xaaji Cabdikariim xuseen Alle ha u naxariisto e waxa uu noqday isaga oo 35 jir ah caaqil oo uu ilaa maanta ahaa , wakhtigaa uu caaqilka noqday oo ku beegan horaantii 40tamaadkii.
Xaaji Cabdikariim xuseen waxa uu ka mid ahaa ragii taageeray xisbigii N.U.F oo ay xataa suldaankiisii suldaan cabdilahi diiriye isaga horyimaadeen sida uu sheegay xaajigu.
Suldaanka iyo farax oomaar oo iyagu isku mabda’a ahaa oo doonayey in aan gumaystuhu dhulka ku nagaan iskuulna ka dhisin wadona ka sameyn ee lala dagaalamo ayaanu ka hor nimi ayuu yidhi xaajigu.
Xaaji Cabdikariim xuseen waxa uu ilaa maalintaa uu diiday in uu Aabihii u Aaro ilaa maanta uu ka shaqeeyaa nabad iyo islaax umadeed.
Xaaji Cabdikariim Alle ha u naxariisto e waxa uu ka mid noqdey golihii guurtida ee madaweyn lagu dhisay dabayaaqadii 80tamaadkii oo uu ilaa maanta ka mid ahaa.
Xaaji Cabdikariim waxa uu ku jiray ilaa intaa guurtidu dhisnayd inteedii badnayd gudida joogtada ah ee golaha Guurtida isaga oo inbadana gudomiye gudi ahaa.
Xaaji Cabdikariim Alle ha naxariisto e waxa uu ahaa ragii dhidibada u taagey ee aas-aaska u ahaa qaranka jamhuuriyada Somaliland wax aanu ahaa shaqsiyaadka faro ku tiriska ah ee ka sii noolaa ragii hore isaga iyo sh.Abdilahi sh. Ali Jawhar, ragaasi oo ay ka mid ahaayeen sheekh ibraahim, sheekh Axmed Sheekh Nuux, sheekh khaliif, Suldaan Cabdi , Sheekh muuse goodaad , Aw jamac saban, Aw Ahmed cumer giriig iyo rag badan oo kale oo maanta inaga hooseeya Alle ha u naxariisto e.
Xaajigu Alle ha naxariisto e intaa ay Somaliland jirtey shir nabadeed kama maqnaan, shirwalbana weeedhiisa ayuu ka dhiibtaa iyada oo marka dambe tiisa uun loo soo noqdo.
Xaajiga cimrigiisa ilaahay ha u naxariisto e waxa lagu qiyaasaa in uu ahaa 120 labaataneeyo, xaajiga dadkiisa iyo dadka ay sii dhaleenba iyaguna waa reero dhan oo dhaqan inkasta oo aanan tiro ahaan ku hayn oo uu baho badan lahaa.
Xaajigu Cabdikariim Alle ha naxariisto e waxa uu ahaa shaqsiga sifaatkaa wanaaga ku sifaysan ee islaaxa lagu yaqaano waxaana uu ahaa odeyga qaranka jamhuuriyada Somaliland.
Xaaji Cabdikariim Alle ha naxariisto e taariikhdiisu maaha mid aynu halkan ku koobi karno waxa aanan idiinla wadaagayaa in qofwaliba waxa uu ka soo gaadhay iyo inta uu ka yaqaan inala wadaago.
Xaaji Cabdikariim xuseen ” Cabdi Waraabe ” waxa laga qorey buug samotalis la yidhaahdo oo lagu ururiyey taariikhdiisa.
Ugu dambayn waxa aan tacsi u dirayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan qaranka jamhuuriyada somaliland ee uu ka baxay marxuun Xaji Cabdikariim Xuseen ” Cabdi waraabe ” oo aan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo , kaalintii uu inoogu jireyna Alle ha inoo buuxiyo , isagana waynaha waxa uga baryeynaa in uu janooyinkiisa ta ugu qaalisan ku casuumo insha Allah.
Aamiin Aamiin Aamiin insha Allah